ULONDOLOZO IFENITSHALA YANGAPHANDLE YASIMAHLA - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Ulondolozo Ifenitshala yangaphandle yaSimahla
Ulondolozo Ifenitshala yangaphandle yaSimahla
Nasi isikhokelo sethu sokugcina ifanitshala yasimahla yasimahla kubandakanya iindidi ezahlukeneyo zokumelana nemozulu kunye nokuqina kwimozulu emanzi, eshushu kunye nengqele. Ifanitshala yangaphandle lutyalo-mali olukhulu kwaye ukhetha eyona nto ibaluleke kakhulu ukuba uyithathele ingqalelo xa uthenga ifanitshala yoyilo lwakho lwepatio.
ugcine umhla izimemo zomtshato
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zefanitshala yangaphandle kuxhomekeke kwizinto kunye nesitayile osinqwenelayo. Sithanda ukuqala sixoxe ngeentlobo ezahlukeneyo zefanitshala yangaphandle kuxhomekeke ekusebenzeni kwayo.
Iindidi zefanitshala yangaphandle
Sihlalo wegadi kunye neTheyibhile
Iiseti zokutya zangaphandle
IPatio kunye neDisk yeeBhari
Eyona Fenitshala yangaphandle iXhathisayo yeMozulu
Yintoni eyona Ifanitshala yangaphandle esemgangathweni?
Cinga ngesimbo sefenitshala yakho yangaphandle
Khetha Ifenitshala yangaphandle ngeNdwangu eqhubekayo
Yeyiphi ifanitshala yangaphandle ehlala ixesha elide?
Eyona Fenitshala yangaphandle ilungele imvula enemozulu
Eyona Fenitshala yangaphandle yeTyuwa yoMoya
Eyona Fenitshala yangaphandle ngeMozulu eQhelekileyo yoBushushu
Eyona Fenitshala yangaphandle inemozulu ebanda kakhulu
Ezona ntlobo zaziwayo zefanitshala yangaphandle ziibhentshi, itafile yegadi kunye nezitulo, iisofa, iiseti zebistro, imivalo yepatio kunye neeseti zokutyela. Funda ngakumbi malunga iintlobo zeepatios Apha.
Jonga le bhentshi yangaphandle inephedi e Indawo 1 [ikhonkco elixhasiweyo]
Ibhentshi engaphandle sisiqwenga sefenitshala esithandwayo esisetyenziswa egadini. Iibhentshi zibonelela ngemfudumalo kwaye zisondele.
Ibhentshi yangaphandle inokusetyenziswa njengendawo yokuhlala, itafile yekofu okanye i-ottoman. Iibhentshi ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo ezifana neenkuni, i-polyethylene weave ephothiweyo kunye nentsimbi.
Jonga esi sihlalo sigalelwe umgubo esitulweni segadi Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Izitulo zegadi ziyinxalenye ebalulekileyo yendawo engaphandle kunye nenketho enkulu yegadi ezincinci, apho unokuphumla khona.
Izitulo zegadi zihlala zenziwe ngomthi, iplastiki, iwicker, kunye nealuminium. Itafile yegadi kwelinye icala, isebenza ngeenjongo ezininzi njengokutya, ukupeyinta, kunye nokufunda.
Izitulo zegadi zikhangeleka zingaphelelanga ngaphandle kwetafile yegadi, inika igadi yakho okanye indawo yokonwabisa ngaphandle ujonge ugqibe kwaye wamkelekile.
Jonga le sofafa yangaphandle ngaphandle Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Olu hlobo lwefanitshala lwangaphandle lubonelela ngomtsalane, onqabileyo, kunye nolonwabo olukhulu kwigadi yakho okanye kwindawo engaphandle.
Ukhetho olufanelekileyo lwefanitshala yangaphandle apho unokuchitha khona ixesha elithile uhleli kwaye uncokola ngaphandle neendwendwe. Kukho iintlobo ezininzi zeesofa zangaphandle ezinokusetyenziswa ezinje ngesofa yecandelo lepatio, izihlalo ezintathu, kunye nesofa yothando. Funda ngakumbi malunga iintlobo zeesofa zecandelo Apha.
Ivela kwi-19thkwinkulungwane yeFrance, olu hlobo lwefanitshala yangaphandle luhlala lunezitulo zentselo kunye netafile encinci, engqukuva, okanye embhoxo. Iiseti zeBistro zihlala zenziwe nge-iron kwaye zinika igadi yakho inkangeleko yokuhamba kunye nenomdla.
Jonga le ndawo yokutyela yangaphandle eyenziwe ngomthi Indawo 1 [ikhonkco elixhasiweyo]
Iiseti zokudlela zangaphandle zilungele ukonwabisa iindwendwe kwaye zibonelela ngokugqibeleleyo ngesidlo sangaphandle kunye nosapho.
Ngokwesiqhelo, iiseti zokudlela zangaphandle zenziwe nge-wicker, i-resin weave, ukhuni kunye nesinyithi. Ukuba unayo indawo yayo, iseti yokutyela ngaphandle iya kuyenza igadi yakho ibonakale ipholile, ifudumele, kwaye yamkelekile.
Jonga le patio ye-wicker ebekwe kuyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ukuzonwabisa ngaphandle kuyonwabisa kakhulu xa unale patio kunye nefenitshala yebar. Imivalo yePatio ibonelela ngendawo yokugcina kunye nokusela efrijini iziselo zakho kwaye inikezela ngezihlalo ezininzi zepatio.
Ngoku sikhankanye ezinye zeentlobo zefenitshala yangaphandle ezinomtsalane ngokwendlela yokwenza; Kwisihloko esilandelayo, sinoluhlu lwefanitshala yangaphandle ngezinto ezisetyenziselwa ukukunceda nokukukhokela ekukhetheni ifenitshala yakho elandelayo yangaphandle.
Nalu uluhlu lwethu lwezona zixhobo zefenitshala zangaphandle zasimahla ezikhoyo ngoku.
Ifenitshala yangaphandle enganyangekiyo yemozulu yezo zenziwe ngealuminium. Ngoba? Umhlwa yintsimbi oxide, kwaye ialuminium ayinakho ukurusa kuba ayinayo into yentsimbi ngokungafaniyo nesinyithi okanye izixhobo zentsimbi.
Xa i-aluminium oxidizing, inomaleko okhuselayo otywina i-aluminium engaxutywanga ngaphakathi; oku kuyivumela ukuba ikwazi ukumelana nokubola okubangelwa kukufuma kunenye intsimbi.
Olu hlobo lwempahla yefenitshala yangaphandle yomelele ngokungaqhelekanga, yomelele kwaye ayinakudlula. Amanzi kunye nokufuma akufuneki nje ukuba zigqobhozele kubuninzi bezinto ezenziweyo.
Ukuba uhlala kwindawo enamanzi anetyuwa, olu hlobo lwefanitshala yangaphandle luya kuba lolona lungcono kuba alunakuze lube nomhlwa. Kwakhona, ngenxa yomphezulu wayo ogudileyo nothe tyaba, ukungunda nokubola akunakugqitha. Olu hlobo lwefanitshala lwangaphandle luqinile, lunzima, kwaye luyilelwe ukuba lufane nomthi opeyintiweyo.
Olu hlobo lwezinto zangaphandle lolunye uhlobo olukhulu kwi-rattan ye-organic kodwa igcine ukubukeka kwayo okunomtsalane kunye nomhlaba.
I-resin wicker ilingisa ubume bendalo be-rattan kunye nembonakalo yendalo; yenziwe ngezinto zokwenziwa zokwaluka kwaye yalukwa phakathi kwewele ngaphandle kokushiya naliphi na ithuba lokuba amanzi angene okanye abumbe ukukhula.
Esi sisixhobo esihle sokusetyenziselwa ifanitshala yangaphandle ngenxa yobume bayo be-grainy inika ukubonakala kwembonakalo ye-gritty-chic. I-Polystone yenziwa ngomxube onesamente wamatye e-powder kunye ne-polyurethane resin, ethi ibunjwe kwaye ifakwe kwisanti kuyo nayiphi na imeko nohlobo lwefanitshala yangaphandle.
Umthi we teak
Ifunyanwa ubukhulu becala kumahlathi aseAsia ahlala ahlaselwa yimvula, imithi yetiak isetyenziselwa ukuqhwithela imozulu kunye nemozulu efumileyo.
Imithi ye-teak iyamelana namanzi kwaye ihlala ilukhuni olukhethiweyo kwifenitshala yangaphandle. I-teak inengqolowa eqinileyo etywina amanzi kwaye inegalelo kumgangatho wayo wokuqina kunye nobuhle.
Olu hlobo lwefanitshala lwangaphandle lomelele, lomelele, kwaye lomelele, kwaye kuba intsimbi eyenziweyo inzima kunezona ntlobo zininzi zefanitshala yangaphandle, lukhetho olufanelekileyo lwendawo enomoya ongqongqo.
Nangona kunjalo, ifenitshala yangaphandle yentsimbi ifuna ukupeyinta ngoku ngoku ngenxa yokuba ipeyinti yayo inokulula ngokulula. Olu hlobo lwefanitshala ludinga imiqamelo yokuhlala kamnandi.
Insimbi engenasici inikezela ngenkangeleko yanamhlanje kunye nesitayile kuyo nayiphi na indawo yangaphandle kwaye ibonakalise ukuba ingaphezulu kwezinto ezingaphandle kuba iyamelana nokubola kunye ne-oxidation. Funda ngakumbi malunga nokuthelekisa kwethu i-aluminium vs ifenitshala yensimbi engenasici Apha.
Ifenitshala yepatio yeplastiki ehlaziyiweyo
Ifenitshala yangaphandle yeplastiki erisayikiliswayo inokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo. Enye yezona zinto zixhaphake kakhulu yi-polyethylene (HDPE).
I-HDPE yimathiriyeli eyi-90% erisayikiliswayo esetyenziswa kwizinto ezininzi zasekhaya ezinje ngejagi zobisi, izitya zesepha, iibhotile zezinto zokucoca njl. Njl.
Ayisiyo kuphela into yokuthenga ifanitshala yeplastikhi ehlaziyiweyo ehlaziyiweyo ilungele okusingqongileyo, lixabiso eliphantsi kwaye ulondolozo lusimahla.
Ezi zinto zisetyenziselwa ifenitshala yangaphandle zenziwe nge-polyethylene (HDPE) ephezulu, iinkqubo ze-pigment-inhibited pigment, iikhompawundi ezinamagwebu, kunye nezinye izinto ezongezwayo ezinokuphinda zisebenze.
Inika ukunganyangeki kwendalo emanzini kunye nokuqina okungagungqiyo okwenza ukuba ibe yeyona nto ibalulekileyo kwifenitshala yangaphandle yemozulu.
Ukwenza indawo entle yokuhlala engaphandle ngamava anomvuzo, kwaye ukukhetha ifenitshala esemgangathweni esemgangathweni eya kuma kuvavanyo lwexesha kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ukuba awazi ukuba yeyiphi eyona nto kufanelekile ukuba uyiqwalasele kwaye uyikhangele.
Khetha ifanitshala eneziko elisezantsi lomxhuzulane, oku kudala isiphumo seankile kwifenitshala ukuze ingagqabhuki ngokulula.
Thintela ifanitshala yangaphandle enezitulo ezixhaswe ngelaphu, oku kunokuba nefuthe kwiparashute kwifenitshala yakho yangaphandle ngeentsuku ezinomoya.
Endaweni yoko, khetha ifanitshala yangaphandle enee-mesh ezinokuphefumla, grated okanye iphakame kancinci kunye nezitayile ezisecaleni; ezi mpawu zivumela imimoya ukuba idlule okanye ijikeleze kubo.
Jonga le sofa yealuminium patio kunye neefowusta ze-polyester kuyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Imeko-bume erhabaxa inokubangela ngokulula ifanitshala yangaphandle kwisimo sezulu elangeni nakwimvula. Imiqamelo enemibala eqaqambileyo inokujika ibe mfiliba kwimitha ye-UV, ngelixa imvula, ikhephu, ubushushu kunye nomoya konke kunokubangela ukuba imisonto ibonakale, ixobule ipeyinti kwaye inokubangela iindawo ezinobungqingili kwifenitshala yakho yangaphandle.
Qiniseka ukuba imithwalo yefanitshala yakho yangaphandle ingamaqhina aqinileyo kunye namalaphu ahambelana ne-UV ngokwendalo. Amalaphu anje ngeempahla ezenziwe nge-acrylic ezenziwe ngombala, i-polyester kunye ne-polyethylene yokudibanisa amalaphu; le yimizekelo yeentambo eziqinileyo ezingavumeli ukungena kwemvula.
Kukho isitayile sefenitshala esingadingi miqamelo, ezinje ngefanitshala eyenziwe ngezinto zokwenziwa ezinjenge polyethylene kunye nefenitshala yangaphandle eyenziwe ngealuminium. Ezi zinto aziyi kudla okanye zinxibe xa zichanabeke kwimozulu embi.
Ngaba iPolywood yeyona Fenitshala yangaphandle ilungileyo?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamaplanga e-polywood ezizinto ezifanelekileyo kwifenitshala yangaphandle. Eyona nto idume kakhulu zizinto ezinoxinano oluphezulu lwe-polyethylene (HDPE) esetyenziselwa ukwakha yonke ifanitshala yemozulu yangaphandle.
Inika ukunganyangeki emanzini, kwaye ihlala ixesha elide. Inemvakalo egudileyo kunye ne-waxy efana nokuthungwa kwe-orenji-peel eyenza ukuba ibe nomtsalane kubaninikhaya kunye nabaqambi. Nokuba yeyona nto ilungileyo iya kuxhomekeka kwindawo yemozulu kunye neemfuno zakho.
Kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo, eyona ifanitshala yangaphandle esemgangathweni yeyona iya kuma uvavanyo lwexesha. Jonga isikhokelo sethu esingezantsi xa ukhetha ukuba loluphi uhlobo lwefenitshala yangaphandle elomeleleyo nakweyiphi na imozulu.
Ukuba uhlala kwilizwe elitshisayo okanye kwiPacific Northwest apho kunetha khona unyaka wonke, kuya kufuneka ukhethe ifenitshala yangaphandle enganyangekiyo nomhlwa kwaye inokumelana nokuvezwa rhoqo kukufuma.
Ifenitshala yangaphandle eyona ilungileyo kwimozulu yemvula ibandakanya i-resin wicker, ifenitshala yealuminium, ipolypropylene, kunye neplanga lomthi. Gwema isinyithi esenziwe ngenxa yokuba inokugqwala kwiindawo zokulahla.
Unalo mbono umhle wonxweme kunye nokugcina iindawo ezintle ngaphakathi kwipropathi yakho, qiniseka ukuba ukhetha ifanitshala yangaphandle enganyangekiyo nomhlwa, inokumelana netyuwa kunye nokufuma kunye nefenitshala eneempawu ezifanayo zemvula ezinje nge-resin wicker, polypropylene, I-polystone kunye ne-polywood.
Kwiindawo zemozulu zentlango, khetha ifenitshala yangaphandle enokumelana nelanga eliqaqambileyo unyaka wonke.
Ukhetho oludumileyo lolu hlobo lwefanitshala yangaphandle kufuneka luhlale luqinile njengolo lwenziwe ngomthi weplwoodwood, ipolstone kunye nentsimbi eyenziwe ngeplastikhi eyenziwe ngobunono obuphezulu.
Ukuba ufuna izinto zendalo ngakumbi, iinkuni ze-teak lolunye ukhetho olulungileyo ukuba uyipolishe rhoqo ukuze ugcine umbala wayo wendalo.
Ukuba uhlala kwiindawo apho ufumana ikhephu eligqithileyo ebusika, ungakhetha ukutyala imali kwifenitshala yangaphandle eyenziwe ngealuminium, ifreyimu yomthi okanye itiak iphathwa ngetywina.
Loluphi uhlobo lwakho oluthandayo lokugcina ifanitshala yasimahla yasimahla? Sazise oyithandayo kwizimvo ezingezantsi. Ukufumana umxholo ofanayo ngakumbi ndwendwela igalari yethu Izimvo zepatio ezivalelweyo .
uthenge ntoni umamazala wakho ngosuku lokuzalwa kwakhe
ndikuthandile nyani iikowuti
unxiba njani eyindoda yomtshato
iingoma zokudanisa nomama